भागरथीको बलात्कारपछि हत्यामा संलग्न को ? सरकारमाथि चौतर्फी दबाब « रिपोर्टर्स नेपाल
भागरथीको बलात्कारपछि हत्यामा संलग्न को ? सरकारमाथि चौतर्फी दबाब
माघ २४, बैतडी । बैतडीको दोगडाकेदार गाउँपालिका ७ की १७ बर्षीया किशोरी भागरथी भट्टको हत्यामा संलग्नको प्रहरीले अझै पहिचान गर्न सकेको छैन । हत्या भएको दुई दिन बितिसक्दा समेत हत्यामा संलग्नको पहिचान हुन नसकेको हो । सनातम धर्म माबि खोचलेकमा कक्षा १२ मा अध्यननरत भागरथी बुधबारबाट हराईरहेकोमा बिहिबार मृत फेला परेकी थिईन । भागरथीको परिवारले भने बलात्कार पछि हत्याको भएको हुनसक्ने बताउदै आएको छ ।